Thetha iSebe lakho le-IT kwiFirefox | Martech Zone
Thetha iSebe lakho le-IT kwiFirefox
Lwesine, Disemba 4, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndicinga ukuba bendonakele ngaphambili xa kufikwa kumasebe e-IT. Ndibaleke inethiwekhi emsebenzini wam wokuqala kwaye ndingumfana onazo zonke izinto zokudlala kwisebe (ngaphandle koMlawuli wam ngelo xesha, bendihlala ndimthengela enye kuqala).
Ukuhamba phakathi kwemisebenzi eyahlukeneyo kwiNtengiso kunye neTekhnoloji kundibeke kumacala omabini omnyango we-IT ukuze ndazi ukuba kanjani Kuyakhathaza ukungabinazo izixhobo ozifunayo. Nangona kunzima ukuxhasa, ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba itekhnoloji kufuneka izise inkqubela phambili kunye nokusebenza kakuhle. Ayinakukwenza oko ukuba utshixiwe. Umhlobo wam olungileyo uAdam Omncinci, obaleka a Inkampani yokuThengisa ngeSelfowuni apha eIndianapolis, ilibeka ngokugqibeleleyo… lisebe lakho le-IT ku vumela wena okanye ukukhubaza kuwe?
Ndibuyele kwicala lokuthengisa emnyango ngomsebenzi wam wangoku kwaye ndizama ukudlala ngemithetho- kodwa akukho lula. Ndiyazazi zonke iisoftware ezifanelekileyo phaya ezithi zihlaziye usuku lwam- kwaye andinakho ukusebenzisa nayiphi na. Ndikwi-PC ngoku endaweni yeMac yam ethembekileyo. Kunzima kakhulu.
Ndikulungele umceli mngeni, nangona! Endaweni yokumbombozela (ngaphandle kwebhlog yam), ndidlala ngemithetho engcono kakhulu kwaye ndizama ukuqonda ukuba yintoni phaya ukunceda. Omnye wabahlanguli bam abakhulu basebenzise iFirefox. Ayisiyo kuphela isikhangeli esimnandi, kodwa izongezo ziyamangalisa ngokwenene:
FireFTP - sisicelo esimnandi se-FTP endinokusiqhuba ngqo kwiFirefox. Kusimahla (kodwa nceda unikele - isiqingatha sayo yonke iminikelo yiya kwisisa). Inayo yonke into oyifunayo kumxhasi we-FTP oqinileyo!
Twitbin -Umxhasi we-Twitter ohamba ngqo kwibar esecaleni yeFirefox. Ayigudisi njengokuqhuba umxhasi wakho, njenge Zuza, Kodwa iyaqhatha. Ndinqwenela ukuba babeka iithebhu kuwo ukuze kube lula ukusuka kwiimpendulo ukuya ngqo kumyalezo, njl.
UmbalaZilla -Nanini na ufuna ukususa umbala kwiphepha lewebhu? Isixhobo esikhulu esincinci sokwenza!
Greasemonkey -I-add-on emangalisayo ekuvumela ukuba ubhale kwaye ubandakanye nezikripthi zakho kumaphepha. Kukho izigidi zeempendulo zeGreaseMonkey ezinomdla apho ezingakunceda nge-gmail kunye netoni yolunye usetyenziso. Phuma Indawo yokuthambisa yakutshanje!
QAPHELA: Sebenzisa UKULUMKA ngeGreasemonkey, kukho izikripthi eziza kuzama ukufaka ulwazi lokungena kwiiwebhusayithi zemali.
KhuphelaIris - ulongezo olumangalisayo oluguqula iPC yakho okanye iMac ibe sisigebenga seMedia!
Iimpazamo - ngaba iindawo zamaxesha ziyakudida? Esi sisongezo esincinci esisebenzisekayo esinokubonelela ngamaxesha akhoyo kwihlabathi liphela.
I-ScribeFire -kukho nomhleli webhlog onokumfaka ngqo kwiFirefox esebenzisa iXML-RPC, umgangatho kuwo onke amaqonga okubhloga okuthumela umxholo. Andiyisebenzisi le, ndihlala ndibambelela kumhleli we-ol kwi-WordPress, kodwa isalungile!
Mhlawumbi elona candelo lililo loku kukuba awudingi malungelo oMlawuli ukuze uzifakele ezi zongezo ekuhlaleni, ukuze ubeke izixhobo ezininzi ezikhoyo ngaphandle kokufaka i-IT guy yakho. Fumana abafana bakho be-IT ukuba bafake iFirefox namhlanje! Ewe, ukuba iFirefox iqala ukukuhlasela ... sukuyitsalela umnxeba i-IT yoncedo… qalisa ukususa ezinye zezo zongezo!
tags: add-IzongezelelozodakafirefoxIzongezo zefirefoxizongezo zentengisoingxelo
Bambalwa kakhulu abanokuyilawula intsholongwane enje!
Dec 4, 2008 ngo-9:26 PM
Dec 4, 2008 ngo-9:50 PM
Dec 4, 2008 ngo-9:58 PM
Ngomhla wama-5 ku-Disemba 2008 ngo-9: 58 AM
Dec 4, 2008 ngo-10:10 PM
Ngomhla wama-5 ku-Disemba 2008 ngo-11: 47 AM
Dec 5, 2008 ngo-5:50 PM
Dec 7, 2008 ngo-9:59 PM
Jun 22, 2012 ngo-10:52 AM